Iibso laptop cusub ama isticmaal - keebaa fiican | TeraNews.net
Iibso laptop cusub ama la isticmaalay - taas oo ka fiican
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 26.08.2021
Dhab ahaantii, had iyo jeer waxay faa'iido u yeelan doontaa inaad iibsato laptop gacanta labaad ah. Isla marka mulkiilaha kowaad uu furo sanduuqa aalad cusub, wuxuu isla markiiba lumiyaa 30% qiimihii. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa taleefannada casriga ah, kiniiniyada, iyo aaladaha kale. Kaliya waa marar dhif ah in adeegsaduhu ku iibiyo mashiin si buuxda u shaqeeya qiimo jaban.
Jawaabta su'aashani had iyo jeer waxay ahaan doontaa isku mid - laptop cusub ayaa had iyo jeer ka fiican xagga saamiga waxqabadka. Ma jirto wax caqli gal ah oo lagu iibiyo qalab si buuxda u shaqeeya oo hufan qiimo jaban. Kadib iibinta laptop, adeegsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu iibsado mid cusub. Markaa sababta uu kii hore u iibinayey ma cadda.
Suuqa dhexdiisa, waxaa naloo soo bandhigaa dalabyo aad u gaar ah-laptops leh dhammaadka ugu sarreeya Core i5 iyo processor i7. Qalabka ayaa xitaa lagu qalabeeyay RAM aad u badan wuxuuna leeyahay diskka SSD. Laakiin maxay tahay markaa faa'iido darrada moodooyinkan. Waa tan waxa:
Chipsetkii dhacay. U fiirso in dhammaan calaamadahani leeyihiin processor-ka 2aad, 3aad, inta badan 4-5 jiil. Taasi waa, tiknoolijigu ugu yaraan waa 10 jir. Waxaanan si fiican u ognahay in soo -saareyaashu aysan u sii deynin darawalada aaladaha shaqeynayay in ka badan 60 bilood. Isla Microsoft ayaa si rasmi ah u diiday inay taageerto chips -kii hore.
Isku -dheelitir la'aanta madal iyo softiweer. Laga bilaabo barnaamijyada OS iyo xafiisyada, oo ku dhammaada biraawsarka. Horumariyayaashu had iyo jeer waxay raadiyaan qalab cusub. Sidaas awgeed, dhammaan qalabka ku jira laptop -ka ma awoodo inuu muujiyo wax -qabad.
Suurtagalnimada casriyaynta. Haa, laptops -yadu waa la casriyeyn karaa. Waxaad dib u soo celin kartaa processor -ka oo aad ballaarin kartaa guddiyada I / O. Laakiin waxaa naloo soo bandhigayaa calankii jiilkii hore. Motherboard -ku ma taageero jiilka xiga ee soo -saareyaasha.
Waa maxay qasaarooyinka laptop -yada la isticmaalay
Barta daciifka ah ee laptop kasta waa shaashadda LCD. Xataa matrix IPS ah oo leh qaraarka FullHD ayaa gubanaya. Iyo 8-10 sano, taranka midabka iyo dhalaalka waa inaan la filan. Waa maxay kaydka iibsashada laptop -ka la isticmaalay - si loo burburiyo araggaaga. Tani waa is -weydaarsi aan sinnayn.
Laptobyada waayeelka ah, in kasta oo ay taageeraan wadista SSD, haddana waxay leeyihiin bandwidth hooseeya. Waxaa intaa dheer, laptops -yada badankood waxay adeegsadaan modules -ka RAM ee duugoobay. Xitaa 16 GB ma badbaadin doonto isticmaaleha haddii uu go'aansado inuu ballaariyo.
Laptop noocee ah ayaad iibsan kartaa
Waxay macno samaynaysaa in la iibsado laptop kaas oo ku habboon xagga qalabka qiimo jaban. Waxaan ka hadleynaa wax badan ama ka yar nidaamyada casriga ah. Kuwani waa soo -saareyaasha AMD Ryzen iyo Intel 8th Gen iyo wixii ka sareeya. Laptop -yadaas waxaa inta badan iibiya ciyaartooy raadinaya waxqabadka nidaamka ugu sarreeya. Way cadahay in ay jiri doonto kaadhka garaafyada oo gooniya, qiimuhuna aad buu u sarreeyaa taas darteed. Laakiin laptop -ka noocaas ahi wuxuu noqon karaa xal aad uga fiican xitaa xitaa новый... Qalabka noocan oo kale ah, ee ku jira suuqa labaad, waa la kala gooyay.
Sidoo kale, laabtoobyada la isticmaalo ayaa mararka qaarkood laga iibiyaa shirkado xira xafiisyadooda. Ifafaalaha waa dhif, laakiin si fiican ayaa loogu talo galay. Xaaladdan oo kale, waxaad iibsan kartaa laptop casri ah, xitaa iyadoo leh processor-ka awoodda hooseeya. Adigoo bixinaya waxoogaa dheeri ah, xarunta adeeggu waxay halkaas ku iibin doontaa wax soo saar badan. Natiijaduna waa keydin wanaagsan oo iibsadaha.
Tablet ama Laptop leh shaashadda taabashada
Laptop -ka Nokia Purebook S14 - shirkadu si fiican uma socoto
Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 (2021) - laptop ciyaar
Teclast TBolt 10 - laptop oo ay ku jiraan alaab qabow
Laptop Framework - waa maxay, maxay yihiin rajooyinka
X2 mini camera ee caruurtu maaha kamarada caruur gabi ahaanba
TV-gee ayaa wanaagsan in la iibsado - 4K ama FullHD
LG DualUp - Kormeer oo leh 16:18 saamiga
Shandad adag oo casri ah oo loogu talagalay ardayda iskuulka
Dadku waxay dareemi karaan calaamadaha ugu horreeya ee cudurka
XUSUUSIN G21 PRO: dulmar guud, faahfaahinta
Nidaamka kala-goynta: noocyada hawo qaboojiyeyaasha, sida loo xusho